KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maleeshiyaad ka tirsan Kooxda Shabaabka oo lagu laayay Duleedka Afmadow - Daawo
Friday 4 May 2012 12:16
Maleeshiyaad ka tirsan Kooxda Shabaabka oo lagu laayay Duleedka Afmadow - Daawo
Kismaayo (Keydmedia) - Inka badan 10 ka tirsan Maleeshiyaadka Kooxda xagjirka ah ee Shabaabka ayaa xalay lagu dilay duleedka degmada Afmadow ee gobbolka Jubbada Hoose xili ay Maleeshiyaadkaasi doonayeen inay weerar gaadma ah ku qaadaan fariisimaha Ciidamada Gaandi iyo kuwa Raaskaambooni.
Caamir Aadan oo kamid ah Saraakiisha Kooxda Raaskaambooni ayaa Keydmedia u sheegay inay fashiliyeen weerar ay Maleeshiyaadka Shabaabku ay doonayeen inay la beegsadaan fariisimahooda ay ku leeyihiin duleedka degmada Afmadow.
Waxaa uu sheegay inay dileen 10 ka tirsan Maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday waxaa ay sidoo kale dhaawaceen inka badan 20 kale, iyagoona ka cararay goobtii uu weerarkaan ka dhacay.
Wuxuu ka gaabsaday inuu noo sheego khasaaraha dhankooda soo gaaray.
Warbaahinta KEYDMEDIA oo isku dayday inay Sawiro ka hesho dhacdadaasi ayaa u suura gashay. Halkaan Ka Daawo Meydadka Maleeshiyaadka Shabaabka ee la laayay oo wali goobtii lagu dilay yaalla.